လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ကိုရီးယာနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ပြီး အင်တာဗျူးကိုကြိုးပမ်းဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ ဟန်နာယူရီ – Cele Oscar
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ကိုရီးယာနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ပြီး အင်တာဗျူးကိုကြိုးပမ်းဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ ဟန်နာယူရီ
May 5, 2021 By L YC Celebrity
ပရိတျသတျကွီးရေ…. Make-Up Artist တဈယောကျဖွဈတဲ့ ရပျတညျနတေဲ့ ဟနျနာယူရီ ဟာဆိုရငျ ပရိတျသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားတာပဲဖွဟျပါတယျနျော.။သူမကတော့ ကိုယျပိုငျ စီပှားရေးလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျနရေုံသားမကပဲ ကွျောငွာ မငျးသမီးတဈယောကျ အဖွဈနဲ့ပါ ရပျတညျနတေဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ဟနျနာယူရီ ဟာဆိုရငျ လကျရှိဖွဈပျေါ နတေဲ့နိုငျငံရေးအခွအေနေ နဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့တဲ့သူတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ အခကျအခဲဖွဟျနတေဲ့ ပွညျသူတှေ ကိုလညျး သူမတတျနိုငျသလောကျကူညီထောကျပံ့ပေးနတောကိုလညျးမွငျတှရေ့ပါတယျ။
မွနျမာ့အရေးကို တကျတကျကွှကွှ Speak Out လုပျပေးတဲ့ ဟနျနာယူရီဟာ လကျရှိမှာ တော့ ကိုရီးယားနိုငျငံ ကိုရောကျရှိနပွေီး မွနျမာ့အရေးနဲ့ပတျသကျပွီး သတငျးအမှနျတှကေို အငျတာဗြူး ဖွပေေးကာ ကမ်ဘာကို အသိပေးနခေဲ့ပါတယျ။ကိုရီးယားနိုငျငံ ကို စစရောကျခွငျးမှာ ဆကျသှယျရမယျ့ ကိုရီးယားဖုနျးကဒျနဲ့ ကိုရီးယားငှေ လညျးမရှိတဲ့အပွငျ အခနျးထဲမှာ သောကျဖို့ ရတေောငျမရှိခဲ့ပါဘူး။ သို့ပမေယျ့လညျး ကိုရီးယား အဂေငျြစီတဈခုက သူမဆီကို အစားအသောကျတှပေို့ပေးပွီး နှေးနှေးထှေးထှေးကွိုဆိုပေးခဲ့ပါတယျ။ သူမြားနိုငျငံမှာနရေပမေယျ့ အခုလိုကူညီပေးတာတှကွေောငျ့ ယိငျးလညျး အရမျးကိုပြျောနခေဲ့ပါတယျ။
မွနျမာ့အရေးအတှကျ အငျတာဗြူး ဖွဖေို့သှား တဲ့လမျးမှာလညျး လောလောဆယျ အလုပျ မရှိသေး တာကွောငျ့ ခြှတောပွီး Bus ပဲစီးသှားသလို ဖွရေမယျ့နရောကိုလညျး (၄၅) မိနဈလောကျ လမျးလြှောကျရတာကွောငျ့ ခွထေောကျ တှတေောငျနာခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။သို့ပမေယျ့ လညျး သူမ ပွောခငျြခဲ့တဲ့ မွနျမာ့အရေးကို အကုနျလုံးပွောလိုကျနိုငျတာမို့ ပငျပနျးတာတှေ နာကငျြတာတှေ ကို အရေးမထားတော့ပါဘူး။ ကိုရီးယားကိုပွနျရောကျ လာခဲ့တဲ့ ယိငျးအတှကျ ကိုရီးယား Company တဈခုကတညျး အစားအသောကျတှေ ပို့ပေးပွီး သူတို့ရဲ့ဂရုစိုကျမှုကို ပွသခဲ့ပါသေးတယျ။
ခဈြခငျရတဲ့ အမတှကေလညျး ပနျးစညျးနဲ့ မုနျ့တှေ ပို့ပေးတာကွောငျ့ ယိငျးတဈယောကျ မတ်ေတာတှေ ထဲမှာ ကနြေပျမဆုံးဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ကိုယျတိုငျအလုပျမရှိသျောငွားလညျး CDM တှအေတှကျ ငှကေပျြ (၃၀၀၀၀) လှူဒါနျးခဲ့ပါသေးတယျ။လူအားရောငှေ အားပါ တတျစှမျးသလောကျပါဝငျတဲ့ သူမကို ပရိသတျတှကေ အရငျကထကျပိုခဈြပွီး ပိုအားပေးလာခဲ့ပါတယျ။ မကျြနှာလေး နဲ့လိုကျအောငျ လှတဲ့စိတျထားလေးဟာ ယိငျးရဲ့ပုံရိပျကို အရငျက ထကျပိုပွီးမွှငျ့တငျပေး ခဲ့ပါတယျ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. Make-Up Artist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ဟန်နာယူရီ ဟာဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတာပဲဖြဟ်ပါတယ်နော်.။သူမကတော့ ကိုယ်ပိုင် စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေရုံသားမကပဲ ကြော်ငြာ မင်းသမီးတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ပါ ရပ်တည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်နာယူရီ ဟာဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ် နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အခက်အခဲဖြဟ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ ကိုလည်း သူမတတ်နိုင်သလောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးကို တက်တက်ကြွကြွ Speak Out လုပ်ပေးတဲ့ ဟန်နာယူရီဟာ လက်ရှိမှာ တော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကိုရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှန်တွေကို အင်တာဗျူး ဖြေပေးကာ ကမ္ဘာကို အသိပေးနေခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကို စစရောက်ခြင်းမှာ ဆက်သွယ်ရမယ့် ကိုရီးယားဖုန်းကဒ်နဲ့ ကိုရီးယားငွေ လည်းမရှိတဲ့အပြင် အခန်းထဲမှာ သောက်ဖို့ ရေတောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း ကိုရီးယား အေဂျင်စီတစ်ခုက သူမဆီကို အစားအသောက်တွေပို့ပေးပြီး နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ သူများနိုင်ငံမှာနေရပေမယ့် အခုလိုကူညီပေးတာတွေကြောင့် ယိင်းလည်း အရမ်းကိုပျော်နေခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးအတွက် အင်တာဗျူး ဖြေဖို့သွား တဲ့လမ်းမှာလည်း လောလောဆယ် အလုပ် မရှိသေး တာကြောင့် ချွေတာပြီး Bus ပဲစီးသွားသလို ဖြေရမယ့်နေရာကိုလည်း (၄၅) မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရတာကြောင့် ခြေထောက် တွေတောင်နာခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။သို့ပေမယ့် လည်း သူမ ပြောချင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အရေးကို အကုန်လုံးပြောလိုက်နိုင်တာမို့ ပင်ပန်းတာတွေ နာကျင်တာတွေ ကို အရေးမထားတော့ပါဘူး။ ကိုရီးယားကိုပြန်ရောက် လာခဲ့တဲ့ ယိင်းအတွက် ကိုရီးယား Company တစ်ခုကတည်း အစားအသောက်တွေ ပို့ပေးပြီး သူတို့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုကို ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။
ချစ်ခင်ရတဲ့ အမတွေကလည်း ပန်းစည်းနဲ့ မုန့်တွေ ပို့ပေးတာကြောင့် ယိင်းတစ်ယောက် မေတ္တာတွေ ထဲမှာ ကျေနပ်မဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်အလုပ်မရှိသော်ငြားလည်း CDM တွေအတွက် ငွေကျပ် (၃၀၀၀၀) လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။လူအားရောငွေ အားပါ တတ်စွမ်းသလောက်ပါဝင်တဲ့ သူမကို ပရိသတ်တွေက အရင်ကထက်ပိုချစ်ပြီး ပိုအားပေးလာခဲ့ပါတယ်။ မျက်နှာလေး နဲ့လိုက်အောင် လှတဲ့စိတ်ထားလေးဟာ ယိင်းရဲ့ပုံရိပ်ကို အရင်က ထက်ပိုပြီးမြှင့်တင်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တရားအလင်းတန်းကို မရမချင်း နေ့ရက်တွေတိုင်းဟာ တော်လှန်ရေးနေ့ဆိုပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလာတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရှောင်တိမ်းနေရင်း ရေပြောင်းမြေပြောင်း မှာ လူရောအသားအရည် တွေရောစုတ်ပြတ် နေတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ခင်သဇင်